Sakaraha – Ambalavao Tsy azo handehanana alina fa mandoro fiara ireo jiolahy
Manomboka amin’ny 10 ora alina dia tsy azo handehanana intsony eo anelanelan’i Sakaraha sy Ambalavao, amin’ny lalam-pirenena
faha fito, RN7 iny, noho ny fanafihan-jiolahy izay mahazo vahana amin’izao fotoana izao. Tsy vitan’ny mamono olona sy mandroba fotsiny ireo olon-dratsy fa mandoro fiara ihany koa, raha tratra alina, hoy hatrany ny tatitra voaray. Tao Isalo, hoy ny fanazavana, dia nisy taksiborosy iray niharan’ny fanafihana ary saika nodoran’ireo jiolahy. Nalaky tonga ny mpitandro ny filaminana ka vaky nandositra izy ireo. Araka ny fanazavana voaray hatrany, misy mpitandro ny filaminana ao Ilakaka izay mitandro ny filaminana amin’ireo toerana voalaza ireo, saingy, miandry “shop” sy tranon’olona ambony izy ireo. Afaka ora roa aorian’ny fanafihana niseho vao tonga izy ireo, hoy hatrany ny fanazavana voaray. Tsy milamina noho izany ny fandriampahalemana amin’iny lalam-pirenena faha fito iny fa saika nahazo vahana izany, tamin’iny herinandro iny, ka taksiborosy telo no lasibatry ny fanafihana. Marihana fa tsy tokony handeha alina intsony ireo fiara mivezivezy sy mampiasa iny RN7 iny, mba hialana amin’ny fanafihana mety hiseho, aorian’ny ora voatondro etsy ambony.